Isizinda se-Ultrasonic se-Ayurvedic Herbs - Hielscher Ultrasound Technology
Ngamakhambi kanye nezinongo aqukethe compounds bioactive, ezisetshenziswa njengoba amakhambi e-Ayurveda imikhuba.
Ultrasonics kuyinto aphakeme isizinda inqubo ukukhiqiza eliphezulu ezikhishwe.
Izinzuzo isizinda ultrasonic kukhona ezithela eliphezulu kakhulu, isizinda okusheshayo futhi lilimale compounds bioactive.
Kungani Ultrasonic Obumba?
isizinda ultrasonic kuyinto omnene, inqubo-non-ezishisayo, ogxile cavitation. ultrasonicators Hielscher sika ukuvumela control eqondile phezu yonke nemingcele sonication (ezifana amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, umfutho). Lokhu kuqinisekisa ukuthi zezakhi ekhishwe kungukuthi phansi ngesikhathi senqubo isizinda, okuyinto ebalulekile for the isizinda kanye nokulungisa isithako nomuthi kwezokwelapha.
Ultrasonically biochemicals ezikhishwe kukhona eliphezulu futhi ubonise bioavailability okungavamile. Ultrasonically basizwe isizinda inyuka ukuhoxa kunciphisa isizinda isikhathi. Okunye izinzuzo yiziphi izinto ezintathu ezibalulekile ongaphakeme inqubo okushisa (okuyi 20 ℃, okuyinto kakhulu ngaphansana at isizinda esivamile) nokusetshenziswa kumakhemikhali awuketshezi oluhlaza (isb amanzi, i-ethanol).
Ultrasonic uxhumekile kwi-inthanethi izilimi
Ukuze bioavailability engcono, herbal phyto-compounds kufanele babekhona ngobukhulu yamangqamuzana inikelwe amaseli womuntu. Phytosomes (pharmacosomes) kukhona kwemithi phospholipid izakhiwo lapho sunstances bioactive we imbiza ziyafakwa. Phytosomes kukwazi ukwakhiwa njengoba ukumiswa, Liposomes, Emulsions, Aqueous micro- / nano-nginihlakaze, okhilimu, lotions, si, amaphilisi, amaphilisi, izimpushana, elimbudumbudu noma amaphilisi. Nge isizinda ultrasonic futhi ekwakhiweni ubuchwepheshe, ukulungiswa ekahle izinto bioavailable kakhulu ezingase zithathwe kalula zibe ukukhiqizwa.
Ukuze amakhambi ezifana ubisi somkhaya, ginkgo biloba, imbewu yamagilebhisi, itiye eliluhlaza, hawthorn, futhi ginseng, umthamo nano uhlobo nanoparticles polymeric, liposomes, micelles, nanospheres, nanocapsules, nanoparticles okuqinile-lipid, futhi nanoemulsions isivele ngokwesayensi kungase kutholakale ukuthi kakhulu ngempumelelo ngaphezulu.
I-CIP / SIP
Ultrasonic Ulungiselela Ayurvedic tonics
Emithini ye-Ayurveda neyase-Eshiya, amakhambi asetshenziswa kakhulu ngokuhlanganiswa kwezakhi zezitshalo eziningi, amafomula afanayo kodwa afanayo. Ukwakheka okunjalo kwamakhambi e-ayurvedic kanye nezinongo kuvame ukuhlanganiswa kube yi-tonic ehlanganisiwe ye-tonic noma i-aroma ukuze kufezeke umuthi osebenza ngempumelelo kakhulu. (Ukwakheka okuvelele kakhulu iTriphala, eyakhiwa i-Amalaki, Haritaki, neBibhitaki).
Ngaphandle tonics, amakhambi nezinongo uzilungiselele njengoba Ayurvedic spice ayinhlama, ezisetshenziswa for ukupheka. Labo ayinhlama spice nososo (spice isb Ayurvedic unamathisele, Masala usoso, chutneys njll) uyiphe wephunga emangalisayo futhi isenzo ngesikhathi esifanayo njengoba ikhambi.
Amandla ultrasound for Plant Isizinda
I-high-intensity ultrasound iyindlela ejwayelekile yokucubungula kokudla, izimboni zamakhemikhali nezimboni. I-homogenization, i-emulsification, ukulondolozwa kanye nokukhishwa yizinqubo ezijwayelekile, ezizuzisa kakhulu ukunikezwa kwe-sonication. I-Ultrasonification isetshenziselwa ukuxuba ama-juice, amasoso nama-pastes ukuze kube nokuzinza okuthuthukile, ukukhipha ukunambitheka kanye ne-aromatic substances kanye nezinto eziphilayo ezifana ne-polyphenols, i-polysaccharides, i-antioxidants, amavithamini nezinye izinhlanganisela zokudla okunomsoco noma wezokwelapha.
Amandla we-ultrasound yinqubo yokwandisa ubuchwepheshe, evelele izindlela zendabuko yesikhumba ezifana ne-maceration, i-hydrodestillation noma i-Soxhlet ngesivuno esiphezulu, isilinganiso sezinga lokukhipha ngokushesha, izimo ezincane zomsebenzi kanye nekhwalithi ephezulu yokukhipha. Ngokulawula nokulungisa ukuqina kwe-ultraound, izidakamizwa ze-herbal zingahle zilungiselelwe njengamakhemikhali angaphansi kwe-micron nano-nano-size – ukuqinisekisa ukutholakala kwe-bioavailability ephezulu.
Ngakho-ke, i-sonication iyindlela yokukhetha yokulungiselela izidakamizwa zesimanje ze-ayurvedic.
Ngezinhlelo ze-ultrasonic ezilawulwa yi-Hielscher, inqubo yokucubungula kanye ne-formaulation ingahle ifakwe enkambweni enokwethenjelwa futhi okuqhubekayo okukhipha izinga eliphezulu.
Hielscher Ultrasonics kuyinto nomkhiqizi ehamba phambili ultrasonic isizinda izinhlelo. Nezinkulungwane olufakiwe ultrasonic isizinda imishini emhlabeni wonke, Hielscher akuyona kuphela umlingani wakho onokwethenjelwa ihadiwe kodwa futhi ukuze kuboniswane nokuthuthukiswa phrojekthi.
Umkhiqizo wethu olukhethiwe lufaka izinhlelo ultrasonic for encane inqubo omningi kakhulu. Izesekeli ezifana sonotrodes ezahlukene (ultrasonic iphenya / izimpondo), booster zidlule cells unikele amandla i elilungile inqubo yokusetha. Abasebenzi bethu kahle abanolwazi ochwepheshe, inqubo onjiniyela kanye biochemists buzana you futhi ukukuqondisa abheke ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kanye ukufakwa.
Xhumana nathi manje! Siyajabula ukusebenzisana nawe ku isizinda inqubo yakho ethile!
1kW futhi 16kW zezimboni izinhlelo ultrasonic for isizinda
Uyasikhathalela, M. G. et al. (2010): Ultrasonically basizwe Isizinda of izimiso bioactive kusuka Quillaja Saponaria Molina. Kwathi Physics 3, 2010. 169-178.
Liu, D. et al. (2011): Ukukhishwa kwe-polyphenols kusuka kumvini wamagilebhisi ngezinqubo ezingavumelani nokukhipha ingxube ngokusebenzisa i-membrane ye-polymeric. ICEF 2011.
Mason, Th. Ngokuthi, F. Vinatoru, M. (2011): I Isizinda of Natural Products usebenzisa ultrasound noma Microwave. Yamanje Organic Chemistry Umq. 15, No. 2 2011 237-247.
Ultrasound Cavitation Nemiphumela yayo ku Isizinda
Uma ukuphakama okukhulu, amagagasi e-ultrasound aphansi-amanxeba ahlanganiswa abe yiziphuzo noma ama-pastes, kuvele i-cavitation. I-ultrasonic noma i-acoustic cavitation yiyona
I-cavitation ye-Ultrasonic i-perforates iphinde iphazamise izindonga zamaselini nama-membranes, ngaleyo ndlela ikhulise uketshezi lweselula ukukhishwa nokudilizwa. Ngaphezu kwalokho, i-solvent ingangena esitokisini ukuthutha amafutha abalulekile namakhemikhali e-bioactive kusuka ngaphakathi kweli cell kuya endaweni ejikelezayo. Ngakho-ke amakhemikhali e-biochemical, ahlanganiswe esitokisini, akhishwa engxenyeni engezansi futhi angahlukaniswa ngemva kwalokho. Ukwedluliswa kwamandla emkhatsini wesikhala sesitshalo kanye ne-solvent (isb. Amanzi, utshwala, i-ethanol) kwenza ukhiqize izitshalo eziphezulu.
Isizinda se-ultrasonic yindlela yokwakha eqinile-yamanzi futhi ingahlanganiswa namanye amasu okukhipha okufana nalokhu i-hydrodistillation, I-Soxhlet, i-supercritical fluid extraction (SFE), i-microwave njll ukuze kwandiswe amandla okwakhiwa kwezinto ezikhona futhi kuzuze emiphumeleni ye-ultrasound. Ngokusebenza kwayo okuvelele ekutholeni ukukhiqizwa / isivuno, izinga lokukhipha kanye nekhwalithi ye-extract, indodanaication yindlela yokwaziswa yokukhiqiza izidakamizwa ze-Ayurvedic. Isizinda se-Ultrasonic ikhulula izakhi ze-phytochemical nge-bioavailability ephakeme kanye nomsebenzi wokulwa ne-antioxidant. Uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokukhiqiza, i-sonication ibangela okuqukethwe okuphakeme kakhulu kwe-phenols, i-flavonoids, okungewona i-flavonoids, i-chlorophyll engqikithi, i-carotenoids ephelele, i-terpenoids, i-phytosterol, kanye nokukhwabanisa okunamandla okukhulu.
Ukusetshenziswa kwe-ultrasound kungathuthukisa inqubo yokukhipha ngokwandisa ukudluliswa kwamandla phakathi kwezinto eziphilayo kanye nezitshalo. Ngaphezu kwalokho ukuwa kwamabhulebhu e-cavitation kuholela ekungcoleni kwamaseli kangcono ngokubunjwa kwamakhamikhijethi ngenxa ye-bubble asymmetrical ukuwa phansi eduze kwesimo esiqinile. Lokhu kuvumela ukungena kwe-solvent ngcono ngaphakathi komzimba wesitshalo ngokwayo futhi kungaphinda kuphule izindonga zeseli. Ngenxa yalokho, ukusebenzisa i-ultrasound ekusetshenzisweni kwezitshalo kunenzuzo ekudluliseni okukhulu kwegazi, ukutholakala okungcono kwe-solvent, ukuxhomekeka okungaphansi kokusetshenziswa kwe-solvent, ukukhipha emazingeni aphansi aphansi, izinga lokukhuphula ngokushesha kanye nemikhiqizo emikhulu yomkhiqizo. Lezi zici zenza i-sonication ibe yisisombululo esikhangayo sokuqothulwa okuningi kanye nesilinganiso sokuthi kufanele sisetshenziswe ekwakheni indawo yokutshala eyedwa lapho izinto ezitshala khona zihlangana ngqo ne-solvent eg isib. I-antioxidants evela ku-Rosemary. "[Mason et al. 2011]
Imiphumela Ultrasonic Obumba
Okuthuthukisiwe IMisa Dlulisa
Zokugwema ukuphuka of Plant Amaseli
Okuthuthukisiwe Penetration kuphela
I-Ayurveda iyona ndlela ephelele yokubhekana nezempilo kanye nenhlalakahle. Ngokolwazi lasendulo nokuxhumana phakathi amakhambi kanye nezempilo, umkhuba Ayurvedic kwenza ukusetshenziswa amakhambi emvelo. I-Ayurveda futhi herbology uvalwe exhunywe: ayelapha, ephulukisa amakhulu amakhambi, izinongo kanye botanicals ayingxenye Ayurvedic herbal ukuphulukiswa uhlelo. tonics Ayurvedic, amafutha kanye Izingxube ingasatshenziswa ngaphakathi njengoba imithi, ibhekwa noma ukudla kanye spplied ngaphandle nge isikhumba (isib amafutha, lotions, yokugcoba) noma njengoba aromatherapy ngisho nge mebrane mucuous yaleli pheshana zokuphefumula.
Imithi, amakhambi plant-based yenziwa ngamagxolo, izinongo, izimpande kanye izimbali kabanzi.
Njalo Botanical is for imiphumela yayo eqondile, isib eyaziwa ukuze kugayeke, ukwenza njenge izidakamizwa eqeda ukuvuvukala noma anti-webhaktheriya, okudambisa ubuhlungu, kunciphise izinkinga respiratorial, ukuthuthukisa impilo jikelele, njll
turmeric (I-Curcuma longa), Ikhumini ajwain, coriander, fennel, saunf, Mint, imbewu lwesinaphi, clove, asafetida (Hing), fenugreek, emnyama, ginger, cardamom, amaqabunga bay, usinamoni, amakinati, triphala, futhi eCayenne kukhona botanicals ethandwa ezisetshenzisiwe ukuze kugayeke futhi umzimba. Basuke iqondiswa ukuze ahlanze umzimba ngokususa noma (i-leyavela ukugaya ompofu) uphinde uvimbele noma ukuphulukisa ukuqunjelwa.
Phytochemicals ekhona ashwagandha (Withania somnifera), Basil ongcwele, licorice, nezama-cherry ebusika baziwa ukuthuthukisa ukusebenza, impilo jikelele nokuphila kade ngokwandisa amandla, amandla & inhlalakahle. Njengoba zibizwa ngokuthi ama adaptogens, lezi phytochemicals siqinise ukumelana umzimba akusingatha ngayo ukucindezeleka.
Tumeric ingenye botanicals ezibaluleke kakhulu Ayurvedic. Iqukethe curcuminoids futhi curcumin. Lezi zinto zehlela zaziwa izinzuzo eziningi impilo yomuntu, ezifana okwandisa ekusebenzeni kobuchopho, umsebenzi okusezingeni eliphezulu antioxidant, ekupholiseni inflammations (isb samathambo), kanye nokuvinjelwa umdlavuza. Curcumin yazuza kakhulu ukunakwa yendabuko meficine Western kanye kwemithi ngenxa umphumela wawo umdlavuza-elwa. Njengoba kokubili, curcuminoids futhi curcumin abakalungiselelwa amanzi-encibilikayo, kufanele encapsulated e liposomes. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana encapsulation ultrasonic kanye liposome ukulungiselela!
Moringa (owaziwa nangokuthi shigru noma drumstick isihlahla) isetshenziselwa anti-fungal yayo, elwa namagciwane, detoxifing izakhiwo. Ecebile Antioxidants uvithamini A, moringa ibizwa ngokuthi superfood.
I-Manjistha ne-neem ziqukethe izinto zokuxosha, ezihlanza nokuhlanza umzimba.
Iphunga elimnandi (Momordica charantia) futhi i-betelnut isetshenziswa ngokuphumelelayo ekwelapheni ukuphikiswa kwe-insulin nesifo sikashukela.
Basil engcwele (eyaziwa nangokuthi nguTulsi; Ocimum sanctum) lisetshenziselwa imiphumela yokuvuvukala, i-antipyretic, ne-analgesic.
Imbewu ye-Kalonji, isihlahla siris, futhi iyaziwa ngemiphumela yabo ezuzisayo ohlelweni lokuphefumula.
Amakhambi Ayurvedic for Doshas Specific
E-Ayurveda, wonke umuntu uhlukaniswa ngokuqondene nomhlobo wakhe omncane. Kunezinhlobo ezintathu zama-dosha – U-Vata, uPitta no-Kapha. Kuzo zonke izinhlobo zezinhlanzi ezikhona ezikhona eziwusizo kakhulu. Thola ngezansi amakhambi nobuningi obubaluleke kakhulu kunoma yiluphi uhlobo lwezintambo:
I-VATA: I-Ashwagandha, i-Triphala, i-Ginger, i-Cinnamon, iCumin
I-PITTA: Amlki, Trifl, Yashtimdhu, Guduci, Kshtwri
I-KAPHA: Turmeric, Haritaki, Triphala, Ginger, clove
Umthelela sonocapillary / umtrasonic capillary umphumela kuyinto kuyanda ezingasadingeki uketshezi e ngamapayipi capillary ngaphansi isenzo ultrasound. Njengoba ezinye izingxenye ezifana amafutha abalulekile yilezi ohlelweni lwama-capillary elinama isitshalo ke kuzolindeleka ukuthi ultrasound bangasiza ewaxosha by umphumela sonocapillary. Kungenzeka ukuthi abanye imihlola kagesi ohambisana umphumela sonocapillary zingaphinde linethonya namuhla. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa lesingenta ncono isizinda compounds polar noma ionic, efana electrophoresis.